देउवा सरकारका पालामा बोल्न पनि नपाइने ! एमसीसीकाे बिराेधमा बाेले कारवाहीकाे चेतावनी
September 4, 2021 N88LeaveaComment on देउवा सरकारका पालामा बोल्न पनि नपाइने ! एमसीसीकाे बिराेधमा बाेले कारवाहीकाे चेतावनी
काठमाडाैं । गृह मन्त्रालयले विदेशी राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा विदेशी मित्रराष्ट्र, विदेशी नागरिक र उनीहरुको सम्पत्तिका विषयमा नकरात्मक टिप्पणी भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित […]
September 4, 2021 N88LeaveaComment on बिहे गर्न सरकारी जागिरे केटा नै चाहिने!
ज्योति मिश्र ‘केटा राम्रो छ नि! अधिकृत छ, त्यो पनि सरकारी। जिन्दगी नै धन्न हुनी हो पछिपछि त। फलाना हाकिमकी बुढी भन्लान् सबले। समाजमा इज्जत पनि प्रसस्तै पाइन्छ। नातागोतामा पनि कसैको छैन हाकिम ज्वाइँ। रवाफै छुट्टै हुन्छ। जिन्दगी सप्रिन्छ। उमेर छँदै गर्नुपर्छ बिहे भन्ने चिज।’ आदि इत्यादिजस्ता कारण देखाइ कन्भिन्स गरिन्छ हाम्रो समाजमा बिहेका लागि। […]
बामदेव गौतम खासमा प्रचण्डको साख्खै सानी आमाको छोरा जस्तै लाग्छः सूर्य थापा
September 4, 2021 N88LeaveaComment on बामदेव गौतम खासमा प्रचण्डको साख्खै सानी आमाको छोरा जस्तै लाग्छः सूर्य थापा
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का युवा नेता सूर्य थापाले हिजोमात्रै एमालेको सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका वामदेव गौतमबारे कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले अस्थिरताको हिसाबले गौतम नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको साख्नै सानी आमाको छोराजस्तै लागेको र रहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लेखेका छन- ‘उनी एकैदिनमा तीनथरी कुरा गर्थे । बिहान […]
आफूलाई पक्रन गृह मन्त्रालयलाई भीम रावलकाे चुनौती, एमसीसीकाे बिराेधमा आवाज उठाउन आह्वान !
September 4, 2021 N88LeaveaComment on आफूलाई पक्रन गृह मन्त्रालयलाई भीम रावलकाे चुनौती, एमसीसीकाे बिराेधमा आवाज उठाउन आह्वान !
काठमाडाैं । नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा एमसीसी अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौँमा अछाम जिल्लाका एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष रावलले जसरी एमसीसी सम्झौतालाई अस्थिर राजनीति भएको बेलामा अघि सारियो त्यसरी नै अहिले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री […]
September 4, 2021 September 4, 2021 N88LeaveaComment on दैलेखमा १९ वर्षीया किशोरी बनिन् कांग्रेसको सभापति
दैलेख । युवा वर्गमा राजनीति तर्फ वितिष्णा बढेको बेलामा एक जना १९ वर्षकी किशोरी दैलेखमा वडाको सभापति बनेकी छन् । उनको पारिवारिक पृष्ठभूमीको हो । बुवा राजनीतिमा रहँदै निधन भएको थियो । उनकै छोरी एकजना १९ वर्षीया किशोरीलाई सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले वडा समिति सभापतिमा निर्वाचित गरेको छ। दैलेखस्थित कांग्रेसका स्वर्गीय नेता भुपेन्द्र महतकी छोरीसमेत रहेकी […]
भारतको जयनगरमा नेपाली युवकको घाँ’टी रे’टि’एको अवस्थामा श’व भेटियो
September 4, 2021 N88LeaveaComment on भारतको जयनगरमा नेपाली युवकको घाँ’टी रे’टि’एको अवस्थामा श’व भेटियो
काठमाडौँ । भारतको जयनगर बजार नजिक एक नेपाली युवकको श’व फे’ला परेको छ । नेपालको सिरहासँग जोडिएको भारतको बिहारको मधुवनी जिल्ला अन्तर्गत जयनगर नजिकै एक नेपाली युवकको घाँ’टी रे ‘टि ‘ए’को र शरीरका विभिन्न भागमा चो ‘ट लागेको अवस्थामा पानीमा श’ व फे’ ला परेको हो । शव सिरहाको गोलबाजर नगरपालिका–४ निपनियाँका ४० वर्षीय दुखरण […]
ओलीका कट्टर समर्थक शेरबहादुर तामाङनै माधव क्याम्पमा !
September 4, 2021 September 4, 2021 N88LeaveaComment on ओलीका कट्टर समर्थक शेरबहादुर तामाङनै माधव क्याम्पमा !
काठमाडौं । आफूलाई अप्ठेरो परेको बेला साथ दिनेलाई पाखा लगाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अवसरवादीलाई मौका दिएपछि एमालेभित्र द्धन्द्ध सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपासहित एमाले पनि विभाजन हुन थालेपछि ओलीका खास मान्छेबाहेक अरुले उनलाई समर्थन जनाएनन् । ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर प्रतिगमन गरेको भन्नेहरु पनि अहिले ओलीले गरेका कामलाई आममाफी दिँदै […]
माओवादी केन्द्र पनि दुई फ्याँक, ओली र नारायणकाजीबीच यस्तो सहमति !
September 4, 2021 N88LeaveaComment on माओवादी केन्द्र पनि दुई फ्याँक, ओली र नारायणकाजीबीच यस्तो सहमति !
काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावले पार्टीमा ठूलो कम्पन पैदा गरेको छ । सभामुख हुँदा यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि पदबाट हटाइएका कृष्णवहादुर महरा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रवक्ता नियुक्त भएपछि पार्टीमा असन्तुष्टीको ज्वारभाटा छुटेको हो । गत सोमबार र मंगलबार काठमाडौंमा बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यसअघि प्रवक्ता रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठको […]
ओली कमरेडको ठुलो धोको थियो, तर पुरा भएन : सुवास नेम्वाङ
September 4, 2021 N88LeaveaComment on ओली कमरेडको ठुलो धोको थियो, तर पुरा भएन : सुवास नेम्वाङ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङले पार्टीनिकट प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी संघको भेलालाई सम्वोधन गर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ठुलो धोको रहेको तर पुरा नभएको बताएका छन् । नेता नेम्वाङले आफूले गरेकाे सम्बोधनमा ओलीको प्रतिनिधित्व गरेको बताए ।एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रमुख अथितिका रुपमा आमन्त्रण गरिएको भेलामा अन्तिम समयमा उनी सहभागी भएका थिएनन्। ‘अध्यक्ष कमरेड […]
एमसीसीबारे देउवा सरकारले सोधेका प्रश्नको २४ घण्टा नबित्दैं फर्कायो अमेरिकाले यस्तो जवाफ !
September 4, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसीबारे देउवा सरकारले सोधेका प्रश्नको २४ घण्टा नबित्दैं फर्कायो अमेरिकाले यस्तो जवाफ !
काठमाडाैं । नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का विषयमा उठिरहेका प्रश्नबारे प्रस्ट पार्न अमेरिकालाई पत्र लेखेको विषयलाई नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले परियोजना अनुमोदनका पक्षमा सकारात्मक कदम भनेको छ। अमेरिकाको यस्तो जवाफपछि जनआक्रोश झनै बढेको छ । देशभरका आन्दोलनको तयारी समेत शुरु भएको छ । एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेपाल भ्रमणको मिति नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले […]